Mhepo Mhepo, Mhepo Yekumiswa Kwekushamisika, Mhepo Struts - Yiconton
Mabhaso & Chitupa
Kabhini Seat Air Spring
Mhepo Yekumiswa Series
Mhepo Susupension Compressor
Kwemakore makumi maviri apfuura yitao yakavandudza kuva inosimudzira inogadzira zvigadzirwa zvepasi rese uye mugadziri wemhepo mhepo uye zvigadzirwa zvekumisa mhepo. yitao yakatanga mune imwe diki yerabha workshop, yakavhura nzira yekuve inozivikanwa mhando nekuparadzira mumakondinendi matanhatu nhasi. Munguva yemakore makumi maviri ano chiitiko, isu takangotarisana nebasa redu ratakarongedza kugadzira kwemhepo yemhepo uye masevhisi.
Kukunda kudzivirira uye kutonga kweCOVID-19 denda
Musi waFebruary 2, Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd uye yakazara-inabatira yavo yehukwanayo Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. mumwe nemumwe akapa CNY 100,000 kubatsira kutsigira kurwisa noveli coronavirus. Ichiri kupa mari nesimba, kambani inoitawo kuedza kudzivirira ...
Nhau dzakanaka! Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. rakabudirira kuwana chitupa cheGuangdong Engineering Technology Center muna 2019
Munguva pfupi yapfuura, Guangdong Dhipatimendi reSainzi neTekinoroji razivisa rondedzero yeGuangdong Engineering and Technology Research Centers muna 2019. Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. mubatsiri wezvese weGuangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd, achibudirira ...